Calaamadeynta naqshadeynta: waa maxay iyo maxay yihiin shaqooyinkeeda ugu muhiimsan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 28/04/2022 15:35 | Design Graphic, General
Luqadda muuqaalku waxay sidoo kale ka kooban tahay calaamado taxane ah, calaamadahan waxaa loo qaabeeyey iyada oo ujeedadu tahay in la yiraahdo, oo kaliya koox walxo midaysan, dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah fariinta si loo gaaro gabagabo guul leh.
Sidan ayay u nashqadeen waxa aynu u naqaano calaamadaha. Maqaalkan, waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo lagama maarmaanka ah oo muhiim kuu ah inaad gasho oo aad wax badan ka barato adduunka calaamadayntagaar ahaan naqshadeynta garaafyada.
Waxaan sidoo kale ku tusi doonaa qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha iyo naqshadeeyayaasha, kuwaas oo si gaar ah ugu heellan naqshadeynta laantan. Oo waxaan kuu sheegi doonaa qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah oo ku saabsan.
1 Calaamadaha: waa maxay?
2 Calaamadaha meelo kala duwan
2.5 Makhaayadaha iyo goobaha madadaalada
3 Otl Aicher iyo calaamad
3.1 Sawirrada Olombikada Munich 1972
3.1.1 Calaamadaha Waldi
Calaamadaha: waa maxay?
Xigasho: Mique Studio
Calaamadaha waxaa lagu qeexay inay tahay mid ka mid ah laamaha muhiimka ah ee ka kooban naqshadeynta garaafyada. Waa muhiim maadaama ay aad u shaqeyso oo ay u adeegto hage ahaan. Waa mid ka mid ah cunsurrada sida wanaagsan u soo koobaya afka iyo siyaabaha kala duwan ee loo wada xiriiro. Taas macnaheedu waa, hal calaamad oo keliya, waxaad ku odhan kartaa jumlad dhan adigoon sheegin. Maxaa weyn? Hagaag, waxaa mahad leh hal-abuurkan, dad badan oo qaba dhibaatooyinka maqalka ayaa la xiriiri kara oo ku wareegi kara deegaan gaar ah iyada oo aan wax dhib ah la kulmin.
Maxaa u eg calaamad fudud, Waa maanta naqshad aad loo faahfaahiyey oo si sax ah u shaqaynaysa oo ugu dambayntii gaadhay gacmaha naqshadaynta garaafyada. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira sifooyin badan oo isu keena noocyadan noocaan ah, laakiin kaliya kuwa ugu aasaasiga ah ayaa ah kuwa si buuxda u qeexaya calaamadaha.
Calaamaduhu waxay leeyihiin ujeeddooyinkeeda ugu weyn aqoonsado oo fududeeyo luqadda. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale buuxinaysaa baahida loo qabo in lagu qanciyo hawlaha aasaasiga ah ee bini'aadamka. Waxaa loo dejiyay inay midba midka kale gaar u noqdaan, waxayna fuliyaan ujeeddooyin kala duwan oo, sida muuqata, dhammaan u horseeda isku shay, fariinta.
Waxaa loo qaabeeyey mid kasta oo ka mid ah sifooyinka deegaanka. Tusaale ahaan, waxaan ka heli karnaa calaamadda caanka ah ee Waxay nagu hogaamisaa meel gaar ah oo baabuurta la dhigto ama meel baabuurta la dhigto, waxaana loo naqshadeeyay dhammaan sifooyinka deegaankan si qofku u garto iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin.
Caadi ahaan waxay xoojiyaan sawirka calaamad gaar ah. Calaamaduhu sidoo kale waxay la shaqeeyaan summadaha, dhab ahaantii, calaamaduhu waxba ma noqon doonaan haddii aan la soo bandhigin sidoo kale aqoonsiga shirkadda iyo lidka ku ah. Marka la soo koobo, waa walxo si fiican isugu dara marka la abuurayo calaamad gaar ah.
Calaamaduhu waxay ka samaysan yihiin walxaha garaafyada sida calaamadaha luqadda. Waxa lagu nashqadeeyay barnaamijyo kala duwan oo nakhshad garaafyo ah, mid kasta oo ka mid ah walxahan waa in si fiican loo fuliyo oo lagu dhejiyaa shabaqyada aasaasiga ah si ay u noqdaan kuwo soo socda. Jaleecada hore waxay u ekaan kartaa hawl fudud, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan iyo dhammaystirnaan.. Hagaag, calaamaduhu ma soo bandhigi karaan qallafsanaan ama ma noqon karaan kuwo muuqaal ahaan dheeli tiran.
Marka la soo koobo, bini'aadamku sidoo kale waxay ku wada xiriiraan calaamado naga caawinaya inaan helno oo nafaheena ku toosino hab aad u raaxo badan. Sidaas darteed, la’aanteed, waxaynu noqon lahayn shakhsiyaad dhammaystiran oo is raadsada oo isku deegaan ku socda.
Calaamadaha meelo kala duwan
Dad badan ayaan ka warqabin sida ay calaamadaha muhiimka u yihiin isbitaallada. Isbitaaladu waa xarumo muhiimad wayn u leh bini'aadmiga, sidoo kale, iyoWaxa kale oo lagama maarmaan ah in la ogeysiiyo bukaanada ama dadka gelaya, in aan la geli karin qaybaha kala duwan ee cisbitaalka aan loo ogolaan karin badbaadada mid kasta oo ka mid ah shakhsiyaadka halkaas ku sugan. Tusaale kale waa calaamadaha ka digaya shucaaca qaarkood, ama walxo kiimikaad oo, haddii aan si habboon loo daawayn, noqon kara sun ama alaab aad u sun ah.
Marka la soo koobo, calaamadaha ayaa aad muhiim u ah in la joogo meelaha sida isbitaallada.
Hudheeladu waxay la mid yihiin isbitaalada, laakiin malaha kiimikooyin yar ayaa la'aan. Calaamadaha sida caadiga ah lagu arko hoteelada, waxay u adeegaan si uu macmiilku mar walba u joogo oo loo hago intii la asaasay.
Waxa jira hudheelo ku yaal meelo waaweyn, kuwaas oo aad u waasac ah oo ka kooban qolal badan. Bal qiyaas haddii calaamadahan midkoodna uusan jirin, qof kastaa wuu lumay ama xitaa ku soo laaban lahaa barta ay horay u soo mareen, waxay noqon lahayd waxa ugu dhow ee majaajilada Alice ee Wonderland.
Deegaan kale oo isticmaalka calaamadaha lagama maarmaanka u ah ayaa shaki la'aan ah garoomada diyaaradaha. Garoomada diyaaraduhu waa meelo uu baaxadiisu aad u wayn tahay, sidaa awgeed waxa loo qaybiyaa dabaqyo ama qaybo kala duwan. Waxaa muhiim ah in dhammaan dadka wadaaga meel isku mid ah, ka baxsan diyaaradda, waxay sidoo kale yaqaanaan meel ay aadaan mar walba si ay u qanciyaan baahidooda aasaasiga ah: makhaayadaha, makhaayadaha, adeegyada, goobta la raaco, iwm.
Kuwani waa qaar ka mid ah agabyada ay tahay inay had iyo jeer noqdaan kuwo aad u cad oo la og yahay.
Xafiisyadu waa kulan kale oo inta badan ay jiraan calaamado badan oo deegaanka ah. Sababta oo ah xafiisku kuma salaysna oo keliya in uu ka kooban yahay kombayuutar, lambarrada telefoonka adeegga macaamiisha iyo kuwa kale. Laakiin sidoo kale waa muhiim in la ogaado sida loo hagaajiyo abaabulka shirkad gaar ah.
Intaa waxaa dheer, habka isgaarsiinta ee isticmaalka calaamadahas sidoo kale waxay ka caawisaa macaamiisha inay dareemaan raaxo iyo ammaan, taas oo sahlaysa hagaajinta sawirka shirkad gaar ah.
Makhaayadaha iyo goobaha madadaalada
Qeyb kale oo aan ka tagi karin waa warshadaha hoteelada. Qaybtan waxaa hadda si sii kordheysa u dalbanaya isticmaalayaasha. Sababtan awgeed, waxaa lama huraan ah in joogitaanka iyo isticmaalka calaamaduhu ay caawiyaan faham luqadeed oo wanaagsan oo deegaanka ah.
Cunsuradan, macaamiishu waxay sidoo kale dareemaan is-waafajin dhammaystiran iyagoo og halka ay wax walba ku jiraan. Iyo shirkad ahaan ama qayb ahaan, wax walbaa muuqaal ahaan aad bay u habaysan yihiin oo dheellitiran yihiin, maadaama wax walba ay ku sugan yihiin goobtooda saxda ah oo la tilmaamay.
Waxa jira qaybo badan sida dukaamada ama meheradaha qaarkood oo isticmaalka calaamaduhu sidoo kale muhiim u yahay.
Otl Aicher iyo calaamad
Otl Aicher wuxuu ahaa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha garaafyada ugu fiican taariikhda. haamagaciisa ayaa si weyn loo shaaciyaa iyadoo ay ugu wacan tahay mashaariicdiisa aadka muhiimka u ah ee uu ugu talagalay aqoonsiga shirkadda, laakiin sidoo kale waxay u istaagtay naqshadeeda calaamadaha.
Ma uu ka badnayn ama ka yarayn aabbaha calaamadaynta naqshadaynta garaafyada. Naqshadoodu waxay u taagan tahay in si sax ah loo habeeyey iyo shaqeyntooda saxda ah. Intaa waxaa dheer, hoos waxaan ku tusin doonaa qaar ka mid ah sawirradiisii ​​ugu fiicnaa ee uu ugu talagalay Ciyaaraha Olombikada.
Sawirrada Olombikada Munich 1972
Sawirada Ciyaaraha Olombikada ee Munich waa lagu sifeeyay waayo waxaa lagu xoojiyay horumar weyn. Si aad u badan, ma aha oo kaliya inay qayb ka ahaayeen mid kasta oo ka mid ah ciyaaraha isboortiga ee ka kooban ciyaarahan, laakiin sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah qaybaha ay sameeyeen.
Sannadkii 1972-kii sawir-gacmeedyadu waxay bilaabeen inay noolaadaan waxaana la soo saaray horu-mar fikradeed oo calaamadeeyay ka hor iyo ka dib taariikhda calaamadaha. Otl Aicher, waa la beddelay qaabab aan la taaban karin oo qaarkood lagu aqoonsaday shuqulladiisa, qaabab kala duwan oo modular ah oo nashqado ah. Sidan oo kale, dhaqdhaqaaqa qofka ayaa si fiican u habaysan, iyo dhaqdhaqaaqa isboorti ee uu qabto. Tani waxay u dhacday Olombikada Tokyo 1964kii.
Waxa kale oo uu u shaqeeyay mashruucyo calaamado kale ah, tusaale ahaan Ciyaaraha Olombikada ee Montreal, halkaas oo mascot caanka ah ee ciyaaraha loo qaabeeyey, mascot-ka Waldi, oo ah shaxan u eg eey. Laakiin wax walba may jirin, maadaama sidaan horay u soo sheegnay, wuxuu sidoo kale naqshadeeyay calaamadaha shirkadaha qaarkood ee uu naqshadeeyay oo uu soo saaray. Si aad u badan, in naqshadihiisu ay noqdeen kuwo aad muhiim u ah sababtoo ah wuxuu ka tagay calaamad shakhsi ah iyaga.
Tani waa sida, sanado ka dib, astaanta caanka ah ee Braun waxay timid, calaamad gebi ahaanba habaysan oo shaqeyneysa. Calaamadda caanka ah waxay qayb ka ahayd mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan uguna wanaagsan ee naqshadeynta garaafyada. Intaa waxaa dheer, waxay u taagan tahay Muhiimadda isticmaalka qaababka joomatari ee ka caawiyay in ay sii xoojiyaan astaanta astaanta. Waxay ahayd shaki la'aan mid ka mid ah noocyada kuwaas oo, sida naqshad kasta, lahaa horumar ku meel gaar ah oo weyn. Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale qayb ka ahaa mashruucyo badan oo aad u khuseeya, shaki la'aan mid ka mid ah tirooyinka naqshadeynta ee ka sarreeya kuwa kale oo badan.
Naqshadeynta iyo calaamaduhu weligoodba waa ay wada socdeen gacanta. Si aanay waxba isu noqon la'aanteed. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in marka aad naqshadeyso calaamad aad ku xisaabtanto boqolkiiba yar ee calaamadaha naqshadahaaga. Hagaag, waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u habayso qaar ka mid ah dhinacyada labaad ee horumarinta astaantaada.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay calaamadaha iyo naqshadeynta, iyo in Otl Aicher uu tixraac wanaagsan u noqday barashadaada iyo dhiirigelinta naqshadahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Calaamadeynta naqshadeynta